Mac အတွက်အကောင်းဆုံး SSD OWC Mercury Electra 6G Gadget သတင်း
Juan Colilla | | hardware, ကွန်ပြူတာများ, လက်တော့ပ်
ဒီနေ့ငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုစမ်းသပ်နေပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ငါ Mac နဲ့သူ့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေအပေါ်မှာငါ့အတွေ့အကြုံကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုဘယ် operating operating system မှာမဆိုသုံးနိုင်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့သင့်ကိုတိုးတက်မှုတစ်ခုယူလာပါလိမ့်မယ်၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထက်စောသော Mac သုံးစွဲသူများအတွက်ဖြစ်သည် SSD တစ်ခု de အခွားသောကမ္ဘာ့ဖလားကွန်ပျူတာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိပြီး Macs နှင့်အတူကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ကတ်တလောက်များကို Apple ကွန်ပျူတာများထံလုံးလုံးအပ်နှံသည်။
ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်မှာကျွန်တော်ဟာ MacBook Pro ကို ၂၀၁၂ နှစ်လယ်လောက်မှာဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက MacBook 2012 လို့လူသိများပါတယ်။ Laptop တစ်လုံးမှာ 9,2GB HDD၊ 500GB RAM၊4'Core i5 dual-core CPU 2Ghz နှင့် Intel HD5တို့ပါဝင်ပါတယ်။ GPU, ပစ္စည်းတစ်ခု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်သာသိရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာ hard drive နှင့် OWC SSD အကြားစွမ်းဆောင်ရည်၏ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုကိုသင်နားလည်နိုင်သည်။
ဒီပစ္စည်းကခွင့်ပြုပါတယ် အဆင့်မြှင့်၏အချို့ဒီဂရီ, Hard disk, CD player၊ RAM နှင့်ဘက်ထရီနှင့်ပန်ကာစသည့် non-soldered အစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးခွင့်ပြုသည်။
ဒီအခြေအနေမျိုးရဲ့အားသာချက်ကိုယူပြီး၊ ကျွန်တော့်အဖွဲ့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယူရို ၁,၂၀၀ အကုန်အကျခံသော်လည်းအလွန်အမင်းနှေးကွေးနေသည် (ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်သည်တစ်ဝက်ဈေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်သည်) နှင့်အရောင်မရှိပါ။
3 Multitask, ယခုအစစ်အမှန်အဘို့
4 Spotlight ကိုကြိုဆိုပါတယ်
5 အဘယ်ကြောင့် OWC ထံမှဝယ်သည်နှင့်အခြားစျေးနှုန်းချိုသာအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်?
6 ငါ ၀ ယ်တယ်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
7 ပြီးတော့ ... Hard Drive နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ။
ယခုတိုငျအောငျ တစ်မိနစ် (သို့) နှစ်နာရီတောင်ကြာသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ FileVault ပို၍ ပင်သက်ဝင်ပါကအလွန်နှေးကွေးသွားသည်။ သို့သော် OWC Mercury 6G SSD အတွက် hard drive ကိုပြောင်းလဲပြီးကတည်းကဤအရာသည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်ဆုံးသောအရာဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်ရွေးနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း) ဒါက ယခု ၁၀ စက္ကန့်သာကြာသည် စားပွဲခုံအဆင်သင့်ရှိခြင်းတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်သန်းသွားသည် Hyperloop.
သင်မပြောမီကအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ယခုဖွင့်သည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် OS ထဲတွင်ထိုအသိဥာဏ်အဆင့်ကိုမရရှိနိုင်သေးသော်လည်းယခုအချိန်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းအချို့ကိုယူခဲ့သည့်“ System Preferences” မှဖွင့်လှစ်ထားသည် ယခုဖွင့်လှစ်သော Final Cut Pro သည်အထိစက္ကန့်ပိုင်းမတိုင်မီက ၁ စက္ကန့်ပဲ.
သို့သော်၎င်းသည်မပြီးဆုံးသေးပါ။ တိုးတက်မှုသည် runtime (သိသာထင်ရှားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 80MB / s မှဖတ် / ရေးမှ 500MB သို့၎င်းထက်ပိုသည်) သို့ရောက်သော်လည်း multitasking သည်အလွန် multitasking ဖြစ်နေသည်၊ ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ၊3နဲ့4စက္ကန့်အကြား ကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည့် applications များအားလုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဒီမှာ Affinity Photo, Final Cut Pro, Motion, iTunes, အရာအားလုံးပါဝင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် hard drive ရှိသည့်အခါ applications အားလုံးကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တွင်ပေါက်ကွဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ မျက်နှာ
ဒီနေရာမှာအပြောင်းအလဲကတကယ်ကိုသိသာထင်ရှားတဲ့နေရာပါ။ အရင်ကကျွန်တော် League of Legends (ငါ Gamer အသုံးပြုသူတစ်ယောက်) ကစားနေတယ်ဆိုရင် "cmd + TAB" အတွက်ဖြတ်လမ်းလေးကိုဒီဂိမ်းမျက်နှာပြင်မှာပဲနေခိုင်းတယ် မတုံ့ပြန်ဘူး, navigate ဒါမှမဟုတ်ငါဂိမ်းကိုပိတ်လိုက်ရတော့မယ်။ အခုဒီ command ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ဗွီဒီယိုဂိမ်းတွေထဲမှာတစ်ခုတည်းသောတိုးတက်မှုမဟုတ်ပါ၊ Legends of Legends နှင့်အခြားသူများ၏ထာဝရမြင်ကွင်း အခုခဏပဲငါဆိုလိုသည်မှာငါအသုံးပြုသောဗီဒီယိုဂိမ်းအများစုတွင်တင်ချိန်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အထိလျှော့ချနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် (သတိထားပါ၊ FPS တိုးလာမည်ကိုမမျှော်လင့်ပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သိုလှောင်မှုပေါ်တွင်မူမတည်ဘဲ GPU ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ) ။
Spotlight ဆိုတာဘာလဲသိလား။ အရင်က "cmd + Space" ကိုနှိပ်ပြီးရှာဖွေတဲ့ဘားဘယ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် ငါရေးထားသမျှသည်ဘာမျှမဖြစ်၊ငါမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းလျှင်မှလွဲ။ , ရုတ်တရက်ရလဒ်များကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခု Spotlight သည်ကျွန်ုပ်၏ MacBook နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတွင်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သည်။ Apple သည် MacBook ကိုမည်သို့ရောင်းချခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ၎င်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ OWC သည်အမြဲတမ်းရှိနေသည်, ရလဒ်ငါရိုက်ထည့်အဖြစ်ချက်ချင်းပေါ်လာ, ဒါကပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်မဟုတျပါလျှင်ငါပြောပါလိမ့်မယ်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း။
အဘယ်ကြောင့် OWC ထံမှဝယ်သည်နှင့်အခြားစျေးနှုန်းချိုသာအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်?
ငါဖော်ပြပြီးခဲ့သည့်အတိုင်း OWC သည် Mac ကွန်ပျူတာများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် RAM memory module များမှတဆင့်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၊ ဘက်ထရီများနှင့်သင်၏ကိရိယာများအတွက်အသုံးအဆောင်များအထိရှာဖွေနိုင်သည်။
သို့သော် OWC သည်ဤစက်အမျိုးအစား၏အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီးကျော်လွန်နိုင်သည်။ အခြား SSD များသည်ဤနည်းပညာရှိသည့်အလားအလာအားလုံး၊ OWC SSDs ကိုမပေးနိုင်ပါ။ ဒီနည်းပညာခွင့်ပြုအများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ရန်.
လွတ်လပ်သောနေရာစီမံခန့်ခွဲမှုပြproblemsနာများကြောင့်အခြား SSDs များသည်လများအတွင်းနှေးကွေးသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Apple နှင့်နည်းပညာကိုရှောင်ရှားသောပြaနာဖြစ်သည် ချုံ့ နှင့် OWC က၎င်း၏ SSD ကြောင့်ခံစားရပါဘူး SanDisk ကားမောင်းသူရှိသည် အရည်အသွေးမြင့်မား နှင့်တစ် ဦး တက်ကြွပြန်လည်စနစ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ SSD သေဆုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်နှင့် ၄ င်း၏အသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်စေသည် (သတိပြုပါ။ OS X El Capitan TRIM တွင်ဇာတိကိုသက်ဝင်နိုင်သည်။ OWC မှမလိုအပ်ဘဲ၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်)၊ ထိုအရာများမလောက်လျှင်၊ အာရုံခံကိရိယာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ် ၎င်းသည်သင့်အားကျန်ရှိသောသက်တမ်း၊ အပူချိန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အမှားအယွင်းများနှင့်အချက်အလက်များစွာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေရန် SSDs နှင့် OWC ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့်အခါချမှတ်ထားသောအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းဖြင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဂုဏ်ယူစွာဖြန့်ဝေသည်။
ငါ ၀ ယ်တယ်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အလွန်ရိုးရှင်း OWC ယောက်ျားများသည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် Mac အထူးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်, သူတို့မှာရှိတယ် ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်ကြားပို့ချဗီဒီယိုများ၏လက်နက်တိုက် ညွှန်ကြားချက်များကိုမည်သို့လိုက်နာရမည်ကိုသိသောမျောက်တစ်ကောင်ပင်သူ၏ MacBook ၏ hard disk ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် (ထို hard disk တွင်သာမကသင်မည်သည့် Mac မော်ဒယ်လ်တွင်မဆိုအားလုံးနီးပါးတွေ့လိမ့်မည်။ )
ထိပ်ဆုံးအနေနှင့် OWC ထုတ်ကုန်တိုင်းတွင် ၄ င်း၏တပ်ဆင်မှုအတွက်လိုအပ်သောကိရိယာများပါ ၀ င်သည်။ ပခုံးဓါးအစရှိသဖြင့် ...
ပြီးတော့ ... Hard Drive နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ။
ပထမတစ်ခုဖြစ်သည် SSD ကို DIY Express Kit နှင့်အတူ ၀ ယ်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအမည်မှာများစွာမပြောသော်လည်း၊ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းမှာ SATA3connector နှင့် port USB 3.0 သည် ၂.၅ လက်မ disk (MacBook hard disk အရွယ်အစားနှင့် OWC SSD အရွယ်အစား) ကိုထည့်ပြီးပြင်ပသိုလှောင်မှုအဖြစ် 2MB / s နှုန်းဖြင့် HDD နှင့် 5Gb / s လျှင်ထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် OWC SSD ဖြစ်ပါက 80MB / s (အခြား SSD များကအချက်အလက်လွှဲပြောင်းမှုနှုန်းကိုမအောင်မြင်နိုင်) ။
အားသာချက်များ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုမှာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်များ၊ ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်သင်လိုချင်သည့်မည်သည့်အရာများအတွက်မဆိုပြင်ပ disk တစ်ခုရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုသင် Time Machine အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးသင်၏ Mac ကိုပြန်လည်ရယူရန်သို့မဟုတ်သင်၏ဒေတာများဆုံးရှုံးရန်လိုအပ်သည့်နေ့အတွက်အရန်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်။
ဒုတိယ option မှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ "Data Doubler" လို့ခေါ်တဲ့ adapter ပါ ၀ င်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖို့ပါ။ ဒီ adapter ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac ထဲမှာရှိတဲ့ "Superdrive" disk drive ကိုအစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဒုတိယ SATA port ကိုထည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒုတိယသိုလှောင်ရေးကိရိယာ၊ အချို့သောကွန်ပျူတာများတွင်ဤဆိပ်ကမ်းတွင်ယခင် SATA ဗားရှင်းရှိကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည် (၂၀၁၂ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ယခင်ကွန်ပျူတာများပါဝင်သည်မဟုတ်ပါ) ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင် SATA စာဖတ်သူ 2012 ရှိလျှင်ဆိုလိုသည်။ အဓိကတစ်ခုနှင့် disk တစ်ခုတွင် SATA3သည်အမြန်နှုန်း 2MB / s နှင့်အလယ်အလတ်၌ 560MB / s ကိုအောင်မြင်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည် HDD ကိုထည့်ရန်ဒုတိယ option ကိုမသက်ရောက်စေပါ။ ဒီ adapter ထဲက hard disk နဲ့ Terminal ကနေတစ်ဆင့် SSD နဲ့ HDD ကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်အိမ်လုပ် Fusion Drive တစ်ခုဖန်တီးပါ။ ဒါဆိုရင် Google မှာလမ်းညွှန်တွေရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အားသာချက်များ Fusion Drive သည်များစွာသော၊ ကျွန်ုပ်တို့ OS X system အတွက် SSD အမြန်နှုန်းရှိခြင်းဖြင့်စတင်ပါက၎င်းသည် boot ကိုချက်ချင်းနှင့် system applications များ၏အဖွင့်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထို့နောက်မည်သည့်အရာမှမကိုက်မချင်း SSD သည်ဖြည့်လိမ့်မည်။ အချိန် OS X သည်အနည်းဆုံးအသုံးပြုသောဖိုင်များကို HDD သို့ရွှေ့ပြီး SSD တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်စွန့်ခွာသွားခြင်းဖြင့်သိုလှောင်မှုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမြန်နှုန်းအကြားစုံလင်သောပေါင်းစပ်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။
ယခုသင်စိတ်ဝင်စားသည့်အပိုင်းသည်လာလျှင်သိရန်လာသည် သင်ဤကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူသင့်သည်၊ မဝယ်သင့်သည် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ကောင်းစွာ:
သင် Mac အသုံးပြုသူများနှင့်သင်၏ Mac သည်သမားရိုးကျအဆင့်မြှင့်ထားသော HDD ဖြင့်လာပါက SSD ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင် gamers များမဟုတ်လျှင် (GPU ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှမလုပ်နိူင်ပါ) မှလွဲ၍ သင်သည် SSD ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်သင် SSD ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်၏ Mac ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အခြားအဆင့်သို့သွားပုံ၊ သင့်ကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်အပလီကေးရှင်းမရှိနိုင်ပါ၊ ပစ္စည်းကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုသင်သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။ အသစ်များကိုအသစ်များကိုအမြန်နှုန်းဖြင့်ငြူစူရန် အကယ်၍ သင့်တွင် RAM 4GB သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းပါက၎င်းသည် 8 သို့မဟုတ် 12 GB အထိတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်၊ OWC သည်၎င်း modules များကို၎င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်းသင်ရရှိနိုင်သည်။
ငါသည်သင်တို့ကို၎င်း၏ catalog မှဝင်ရောက်ခွင့်ထားခဲ့ပါတစ်ချိန်တည်းလင့်ခ်တွင်ရှိသည့်ပုံစံနှင့်စွမ်းရည်ကိုရွေးချယ်ပါ (သို့မဟုတ်အချို့သောသင်၏ Mac ပုံစံတွင်)
OWC မာကျူရီ Electra 6G SSD
OWC RAM module တွေ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » hardware » Other World Computing's SSD, OWC Mercury 6G ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်